Sweden oo ogolaatey sharci dib u mideynta qoysaska kaasi oo Somalida saameyey – SBC
Sweden oo ogolaatey sharci dib u mideynta qoysaska kaasi oo Somalida saameyey
Posted by editor on September 20, 2011 Comments
Dawlada Sweden ayaa heshiis la gaartey xisbiga Green Part (MP) ee dalkaasi kaasi oo meesha ka saaraya xayitadii dawladu ku soo rogtey nidaamka dadka la isagu keeno ama ay dib u midoobayaan qoysaska.
Heshiiskan ay dawlada Sweden ku ogaalatey dib u midowga qoysaska ayaa si gaar ah u saameyeey kumaan kun oo qoys oo Soomaali ah oo dhibaato ka qabsatey sharci ay dawladu soo rogtey sanadkii 2010 kaasi oo kala irdheeyey kumanaan qoys.
Dhaqangalinta in qoysaska Soomaalida ee kala maqan la isku keeno ayaa bilaabanaysa horaanta sanadka 2012-ka iyadoo boqolaal qof oo Soomaali ah oo ku dhaqan dalka Sweden loo ogaalan doono inay dib ula midoobaan qoysaskoodii, balse waxaa la sheegay in baaritaan adag la marin doono qoysaska isa sheeganaya ee doonaya in dib ay iskula midoobaan.
Dad badan oo Soomaali ah oo ku dhaqan Sweden ayaa loo diidey in loo keeno xaasaskoodii, ragoodii ama caruurtoodii taasi oo la sheegay inay kala dhalatey ka dib markii ay meel ka baxeen la waayeen kumaan Soomaali ah oo lagu keenay xaasas ama say kuwaasi oo dib isku dhiibay arintaasi oo keentey in la joojiyo nidaamka dadka la isagu keeno dalkaasi.
In ka badan 4 kun oo Soomaali ah ayaa la sheegay inay fursad u heli doonaan sidii ay dib iskula midoobi lahaayeen, waxaana talaabadan ka bixi doonta dawlada Sweden 130 milyan oo doolar oo ku aadan sidii loo hubin lahaa qoysaska isa sheeganaya.
Dhinaca kale caruurta ka soo jeeda qoysaska aan sharciyada ku laheyn dalka Sweden ayaa loo ogolaadey nidaam waxbarasho oo la mid ah kan ilmaha kale sida uu shaaca ka qaaday wasiirka waxbarashada Jan Björklund.